Nin u shaqeynayay wasaarada waxbarashada oo caawa lagu dilay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Nin u shaqeynayay wasaarada waxbarashada oo caawa lagu dilay magaalada Muqdisho
Koox bistoolado ku hubeysan islamarkaana watay mooto labo lugeey ah ayaa caawa agagaarka buundada Ansalooti, gaar ahaan dhinaca X/jajab ee magaalada Muqdisho ku dishay nin magaciisa lagu sheegay Mukhtaar Maxamed Kheyre.
Marxuumka la dilay ayaa la sheegayaa inuu ka shaqeynayay xarunta wasaarada waxbarashada ee magaalada Muqdisho, waxaana xilligii la dilaayay uu kusii jeeday gurigiisa kadib markii uu kasoo baxay masjid uu salaadii maqribka kusoo dukaday.
Kooxihii dilka ka dambeysay ayaa islamarkiiba goobta isaga baxsaday, waxaana markii dambe goobtaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka ee NISA oo howlgalo baaritaano ah halkaasi ka sameeyay.
Ma jirto cid illaa iyo haatan lagu soo qabtay baaritaanadaasi, ama sheegatay mas’uuliyadda dilka loo geystay Mukhtaar Maxamed Kheyre.
Tan iyo markii la doortay madaxweyne Farmaajo waxaa magaalada Muqdisho kusoo kordhay dilalka iyo qaraxyada loo geysanaayo nabadoonada, dadka shacabka ah iyo mas’uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.